Copac Inoti Hurongwa hweBumbiro Idzva Hunogona Kupera Muna Gunyana
Komiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCopac, inoti kana zvinhu zvikafamba zvakanaka draft constitution inogona kunge yapera kunyorwa mukupera kwaGunyana.
Mumwe wemasachigaro eCopac, VaDouglas Mwonzora, vanoti mashoko aburitswa nebepanhau reThe Herald ekuti vakati sarudzo dzinogona kuitwa muna Gunyana, haasi echokwadi. VaMwonzora vati vanotarisira kuti vanogona kunge varova ndima panosvika Gunyana, vachiti basa resarudzo rinobatwa neZimbabwe Electoral Commission, kwete neCopac.
Bepanhau reThe Herald rinoti rakaita hurukuro naVaMwonzora nemumwe wavo sachigaro anomirira Zanu PF muCopac, VaPaul Mangwana, pamusoro pezvesarudzo. Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaMangwana panyaya iyi.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nebato ravo reZanu PF vari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rino, asi mapato eMDC ari maviri ari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rinouya, uye kuti kushungurudzwa kwenhengo dzawo kumiswe.
Ukuwo, mapato ose ari muhurumende ari kuitawo misangano yekutarisa zvasara kuzadziswa muGlobal Political Agreement uye kuronga hwaro hwesarudzo kana kuti election roadmap.
VaMwonzora vaudza Studio7 kuti komiti yavo yakawana mari inoita mamiriyoni mapfumbamwe emadhora iri kutarisirwa kubva kuhurumende nekumasangano anobatsira.
Vati mari iyi ichabatsira zvikuru mukuita basa rasara, kuitira kuti vange vapedza kunyora bumbiro idzva muna Gunyana.